रविको मुद्दामा नेताको आलोचना किन ? – Janacharcha.com
» समाचार अंक: 656
रविको मुद्दामा नेताको आलोचना किन ?
Janacharcha.com शुक्रबार, भाद्र ०६, २०७६ मा प्रकाशित
रवि लामेछाने अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । र प्रपञ्च रचि रविलाई फसाउन खोजेएको रविका समर्थकहरुले राजनितिज्ञहरुलाई आरोप लगाईरहेका छन् । विषेश गरी केपी ओली र प्रचण्डले रिसिबि साध्नका लागी उनलाई फसाउन खोजेको रवि पक्षधरको आरोप छ ।
तर गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने यस घटनामा राजनितिक कुनै पनि संलग्नत देखिदैन् । रवि लामेछानेले नै गर्दा आफु मर्न बाध्य भएको पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अनुसार नै प्रहरीले रविलाई नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ । त्यसलगतै जिल्ला अदालत चितवनले उनलाई पाँच दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको पाईन्छ । पाँच दिनभत्रि पनि अनुसान्धान नसकिएपछि आदालतले पुनःपाँच दिनको म्याद थप गरी प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न भनिएको पाउन सकिन्छ ।
यो प्रक्रियालाई सर्सर्ती निहाल्दा कतै पनि अहिलेसम्म राजनितिक प्रभाव परेको देखिदैन् ।
सामान्यता यस्तो प्रकृतिको प्राय मुद्दाहरुमा म्याद थप गरी अनुसन्धानलाई अघि बढाउने नै अभियास छ । र यो पहिलैदेखि अभियास गरिदै आएको अनुसन्धानको सामान्य प्रक्रिया नै हो । तर रवि पक्षधरहरु भने यस किसमिको मुद्दामा यसै गरी अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा मान्न तयार छैनन् ।
नियन्त्रणमा लिनु त सामान्य कुरा भयो, यदी अदालतका नजिरहरुलाई (पुराना आदेश) निहाल्ने हो भने रिवलाई थुनामा राख्ने आदेश भयो भने पनि शंसकित हुनुपर्ने अवस्था छैन् । किनभने आदलतले यस खाले थुप्रै मुद्दाहरुमा धेरैलाई पुर्पक्षामा थुनिसकेको नजिरहरु छन् ।